သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ပါ မြင်ပေးစေလိုပါတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အလှမယ်၊ အဆိုတော် ဟန်သီ
27 Jul 2017 . 6:13 PM
သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ပါ မြင်ပေးစေလိုပါတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အလှမယ်၊ အဆိုတော် ဟန်သီ
ဟန်သီအနေနဲ့ သူ့ကို Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ မြင်ပေးစေလိုတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို အလှမယ်၊ အဆိုတော် နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟန်သီက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ဟန်သီအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်လိုင်းကိုလည်း သွားချင်တယ်။ သရုပ်ဆောင်ပညာကိုလည်း သွားသင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လိုပါ မြင်စေချင်တယ်။ Miss တစ်ယောက်ပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပရဟိတပြုလုပ်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်တင်သာမက ရုပ်ရှင်အနုပညာလုပ်ဆောင်နေသူ အဖြစ်နှင့်ပါ ဟန်သီရဲ့အနုပညာတွေကို ပရိတ်သတ်ကိုကြီးဆီကိုချပြချင်တယ်။”လို့ ဟန်သီက ဆိုပါတယ်။
ဟန်သီအနေနဲ့တော့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို ၂၀၁၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းက အလွမ်းဒဏ္ဍာရီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“Miss နဲ့ ပတ်သတ်ရင်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးကို ရထားတဲ့အတွက် Miss တစ်ယောက်အနေနှင့်လည်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပြီး အလှမယ်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာလည်း အများကြီးကူညီဖို့တွေရှိတယ်။ Miss ပွဲတွေမှာ သီချင်းဆိုဖို့တွေလည်းရှိတယ်။ ပရဟိတတွေကအစ လုပ်သွားမှာပါ။”လို့ ဟန်သီက ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကလည်း မချစ်တတ်သေးဘူး နာမည်နဲ့ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးကို သီဆိုဖြန့်ချိခဲ့သေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဟန်သီဟာ Miss လောကထဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်က Miss Supranational Asia and Oceania Queen အပါအဝင် ဆုပေါင်း(၁၀)ဆုလောက်ရရှိထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈပါ မွငျပေးစလေိုပါတယျလို့ ဆိုလာတဲ့ အလှမယျ၊ အဆိုတျော ဟနျသီ
ဟနျသီအနနေဲ့ သူ့ကို Miss တဈယောကျအနနေဲ့သာမက သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ပါ မွငျပေးစလေိုတယျလို့ ပရိသတျတှကေို အလှမယျ၊ အဆိုတျော နဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဟနျသီက ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
“ဟနျသီအနနေဲ့ သရုပျဆောငျလိုငျးကိုလညျး သှားခငျြတယျ။ သရုပျဆောငျပညာကိုလညျး သှားသငျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ သရုပျဆောငျတဈယောကျလိုပဲ မွငျစခေငျြတယျ။ Miss တဈယောကျပဲ မဟုတျဘဲနဲ့ ပရဟိတပွုလုပျသူတဈယောကျအနနှေငျ့တငျသာမက ရုပျရှငျအနုပညာလုပျဆောငျနသေူ အဖွဈနှငျ့ပါ ဟနျသီရဲ့အနုပညာတှကေို ပရိတျသတျကိုကွီးဆီကိုခပြွခငျြတယျ။”လို့ ဟနျသီက ဆိုပါတယျ။
ဟနျသီအနနေဲ့တော့ သရုပျဆောငျအလုပျကို ၂၀၁၆ နှဈကုနျပိုငျးက အလှမျးဒဏ်ဍာရီ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ဇာတျဆောငျအဖွဈ ပါဝငျရိုကျကူးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
“Miss နဲ့ ပတျသတျရငျလညျး တနျဖိုးရှိတဲ့အရာလေးကို ရထားတဲ့အတှကျ Miss တဈယောကျအနနှေငျ့လညျး အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျပွီး အလှမယျနှငျ့သကျဆိုငျတဲ့ပှဲတှမှောလညျး အမြားကွီးကူညီဖို့တှရှေိတယျ။ Miss ပှဲတှမှော သီခငျြးဆိုဖို့တှလေညျးရှိတယျ။ ပရဟိတတှကေအစ လုပျသှားမှာပါ။”လို့ ဟနျသီက ဆိုပါတယျ။
သူမဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးကလညျး မခဈြတတျသေးဘူး နာမညျနဲ့ တဈကိုယျတျောတေးစီးရီးကို သီဆိုဖွနျ့ခြိခဲ့သေးတယျလို့ ပွောပါတယျ။ဟနျသီဟာ Miss လောကထဲကို ၂၀၁၂ ခုနှဈက စတငျဝငျရောကျခဲ့ပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈက Miss Supranational Asia and Oceania Queen အပါအဝငျ ဆုပေါငျး(၁၀)ဆုလောကျရရှိထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
by Naw Hsel Hte .4months ago
by Min Than Htike .5months ago